Hetsika tsy ara-politika manoloana ny fitsidihan’i Bush ao Goatemalà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2018 3:45 GMT
Sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana avy amin'i R. Scott Lamorte (Ato raha hijery sary maromaro).
Nitsidika ity herinandro ity tamin'ny alàlan'ny tontolon'ny bilaogy ao Goatemalà, nahaliana ny famakiana ireo fanehoan-kevitra tamin'ny fitsidihana vao haingana nataon'ny Filoha Bush, izay tsy mitovy tamin'ny fanambarana mahazatra manohitra ny politikan'i Etazonia. Bilaogera sasany niady hevitra momba ny fampisehoana ireo mpilalao sarimihetsika Hollywood, sy momba ny fihetsiketsehana nampiato ny hetsik'izy ireo, ary ny fanarenana fitsidihana toerana masina tsy nankatoavina amin'ny alalan'ny “limpia” (fanadiovana) ataon'ireo vondrona tompotany .
Nilaza i CARPE DIEM fa tsy maintsy manondro ny tenany ny fidirana ao anatin'ny tranony manokana. Namariparitra ny lalany nandritra ny fitsidihan'i Bush ihany koa izy:
Voahodidina ny lalako. Misy ny fefy vy any amin'ny farany ary voasakana mivaingana amin'ny ilany hafa. Misy ireo Polisim-pirenena, polisy monisipaly, SAAS, ireo manampahefana misahana ny rotaka, ny miaramila goatemalteka sy amerikana US, ny alika, ireo mpamono afo, mpanao gazety, mpanaramaso liana te-hizaha, ary iza no mahalala izay hafa.
Ao amin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe “Lehilahy manao Pataloha fohy”, mpanao gazety sady mpahay toekarena, Marta Yolanda Díaz nanambara fa sahiran-tsaina izy, raha teo amin'ny toeran'ireo mpihazakazaka Alahady sy ny fianakaviana, nahita namana roa nilaza ny tenany ho Goatemalteka izy, raha hita mazava fa mpikambana ao amin'ny sampam-pitsikilovana Amerikana izy ireo:
Na eo aza ny hatezerana teo amiko noho ny fanitsakitsahana goavana ny zontsika hivezivezy malalaka izay tsy voasazy ireo mpanao politika manamora ny fitsidihan'i George W. Bush, tsy tanako ny hehy (tsy mila mpanaitaitra) rehefa misaina momba ny fahatsoran’ ireo mpikambana kinga ao amin'ny sampam-pitsikilovana Amerikana, izay nihevitra fa afaka mivezivezy tsy misy mahatsikaritra ao amin'ny firenena izay tsy olona fotsy hoditra, bokona, 1,80 metatra ny halavany. Na izany aza, nihevitra izy ireo fa toy Goatemalteka rehetra. Mampihomehy.
Tao amin'ny bilaogin'i Ana, mpampianatra, poeta sady mpanao gazety, miandry izy mandra-pialan'i Bush, ary tezitra izy satria tsy tonga nanatrika ny fampianarany ny antsasaky ny mpianany ao amin'ny oniversite:
Mihoatra ny antsasaky ny mpianatro no tsy nianatra androany satria najanona tao amin'ity tanàna ity ny fivezivezena malalaka mandrapahatongan'ny alina rehefa hiala an'i Meksika i Kaiser, ny tiako lazaina, ny filoha Bush.
Nandeha tany amin'ny toeram-pivarotam-boky ankafiziko indrindra tao an-tanàna aho, niaraka tamin'ny ankizivavy Amerikana roa. Nividy boky tamin'ny teny Espaniôla izy ireo, ary nianatra ny fomba fiteny hoe Gracias! Lasa nieritreritra aho fa mpihavana daholo ny rehetra, ary afaka manampy antsika amin'ny fomba tsy haintsika mandrefy ny rehetra, na dia ny fitsidihana tsy mampahazo aina sy tsy ilaina nataon”i Bush aza. Angamba mety ho lasa mpanao politika Amerikanina ireo tovovavy ireo indray andro any.